Global Voices teny Malagasy » Natsahatra Mandritra Ny Fotoana Voafetra Ny Fampitam-baovao Tsy Miankina Ao Oman · Global Voices teny Malagasy » Print
Natsahatra Mandritra Ny Fotoana Voafetra Ny Fampitam-baovao Tsy Miankina Ao Oman
Voadika ny 05 Novambra 2016 5:04 GMT 1	 · Mpanoratra Afef Abrougui Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Oman, Fahalalahàna miteny, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona, GV Mpisolovava
Sary soratsoratra manambara sivana avy amin'ny Pixabay. CC0, sehatra azon'ny daholobe ampiasaina.
Nampitsahatra ny asany tamin'ny 30 Oktobra ny gazety an-tserasera tsy miankina voalohany ao Oman antsoina hoe Albalad .
Nanambara ny fanakatonana ny tranonkalam-baovaony ny fitantanana ny gazety Albalad… veloma ry mpamaky hajaina.
Nanomboka tamin'ny taona 2012 ny gazety ary rakotra lohahevitra isan-karazany anisan'izany ny politika, ny toe-karena sy ny kolontsaina tao Oman. Tsy nilaza ny antony nahatonga ny fanakatonana ireo ekipa mpamoaka lahatsoratra..
Tamin'ny hafatra  niantefa tamin'ny mpamakiny, nilaza ny olana natrehany teo aloha izy ireo, kanefa nilaza fa nanapa-kevitra ny hampitsahatra “ny fifanarahan[y] manokana” .
Niatrika faneriterena maro ny gazety… Notazoninay ho anay samirery ireo faneriterena ireo, satria anisan'ny asa fanaovan-gazety sy mampiavaka an'ilay asa. Mbola misy sisam-paneriterena hatrany anefa ato aminay. Kanefa, amin'izao fotoana izao miatrika fotoan-tsarotra izahay: nandray ny fanapahan-kevitra fanakatonana tsy nisy faneriterena avy amin'olonkafa. Fanapahan-kevitra avy amin'ny fitantanana sy ny ekipan’ ity tetikasa ity izay miasa andro aman'alina ho an'ny mpamakinay hajaina izao… Miala tsiny indrindra amin'ireo mpihaino izahay fa noho ny toe-javatra amin'izao fotoana izao dia: “tonga ny fotoana hampitsaharana ny fifanarahanay manokana”
Taorian'ny fanambarana fanakatonana ny Albalad, nisaona ny fanapahan-kevitra sy ny endriky ny fahalalaham-pitenenana ao amin'ny firenena tao amin'ny Twitter ireo Omanis .
Nikatona ny Albalad … Inona no mitranga amin'ny hoavin'ny asa fanaovan-gazety eto Oman.
indrisy, tsy afaka miteny na manana sehatra ho an'ny asa fanaovan-gazety afaka na fahalalaham-pitenenana isika. Raha fintinina, tsy misy ny fahalalahana miteny. Taonjato faha-21 isika izao, mahamenatra.
Nifanojo tamin'ny famoretana lehibe kokoa momba ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety tao Oman ny fanakatonana ny Albalad. Tamin'ny Aogositra teo, nanakatona  ny gazety mivoaka isan'andro Alzamn ny governemanta ary nanatsahatra ny tranonkalany  noho ny tatitra navoakany momba ny fitsabahan'ny governemanta tamin'ny fitsarana. Ny 27 Jolay teo, niampanga ireo manampahefana ho nanery ny mpitsaran'ny Fitsarana Tampony tao amin'ny firenena tamin'ny famadihana ny didim-pitsarana momba ny raharaham-pandovana ny tatitra . Notànana sy nogadraina  ny mpanao gazety telo tao amin'ny Azamn, anisan'izany ny talen-dahatsoratra, noho ny fiampangana izay ahitana “fanakorontanana ny filaminam-bahoaka” sy ny “fanalam-baraka ny Fanjakana”.
Ny fanakatonana ny Alzamn
Meloka noho ny “fanakorontanana ny filaminam-bahoaka”, “fanararaotana ny fampiasana ny Aterineto” “famoahana amin'ny antsipiriany ny raharaha [ady madio] iray “, ary “fanalam-baraka ny fanjakana” ny talen-dahatsoratra Al-Maamari Ibrahim. Voaheloka higadra telo taona an-tranomaizina izy, sy handoa lamandy 3000 Omani Riyals (7.800$ Amerikana). Voarara ihany koa izy tsy hanao asa famoaham-baovao mandritra ny herintaona.
Voaheloka noho ny “fanohintohinana ny filaminam-bahoaka”, “fanararaotana ny fampiasana ny Aterineto”, “fanalam-baraka ny fanjakana”,”famoahana amin'ny antsipiriany ny raharaha [ady madio] iray” ny sekretera mpamoaka lahatsoratra Yousef Al-Haj , nandika ny fandraràna fandefasana vaovao sy nanendrikendrika. Nahazo sazy telo taona an-tranomaizina ihany koa izy, lamandy 3000 Omani Riyals, ary voarara tsy hanao asa famoaham-baovao mandritra ny herintaona.
Nahazo sazy herintaona an-tranomaizina sady nampandoavina lamandy arivo Omani riyals ( 2600$ Amerikana) noho ny fampiasana “ny tambajotram-baovao hampielezana fitaovana izay mety hanimba ny filaminam-bahoaka” ny mpitati-baovao Zaher Al-Abri.
Loharanom-baovao avy amin'ny: Foiben'ny Zon'olombelona Helodrano
Tany am-piandohan'ity taona ity, nitsahatra tamin'ny famoahana lahatsoratra “mandritra ny fotoana voafetra” ny sehatra fampitam-baovao tsy miankina iray hafa, Mowatin . Tamin'ny fanambarana  fohy izay navoaka tamin'ny 14 Janoary, niresaka ny “toe-javatra noho ny antony tsy miankina aminy” ny gazety, indrindra ny faniriany mba hananan'ireo mpamoaka vaovao sy ireo mpanoratra “fiarovana azo antoka”. Araka ny Foiben'ny Zon'olombelona Helodrano, miatrika “fandrahonana mitohy” avy amin'ny Sampan-draharahan'ny Filaminana Anatiny  (ISS), izay sampam-pitsikilovana ny fiarovam-pirenena ny gazetiboky.
Firenena kely manana fahamarinan-toerana sy mponina efatra tapitrisa, malaza noho ny vakoka sarobidy voajanahary, “manana ny iray amin'ireo rafitra ara-dalàna voafetra indrindra” izay mifehy ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety ao amin'ny faritra Arabo ny Sultanà ao Oman, araka ny tatitry  ny Fahalalahan'ny Fanontan-gazety 2015. Moa ve ny fanakatonana ny fampitam-baovao tsy miankina telo tamin'ity taona ity no famelezana farany ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety ao Oman?
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/11/05/91364/
 Sampan-draharahan'ny Filaminana Anatiny: https://en.wikipedia.org/wiki/Internal_Security_Service